India"Waan ku dadaaleynaa sidii aan u siideyn lahayn muwaadiniinteena" – SBC
India"Waan ku dadaaleynaa sidii aan u siideyn lahayn muwaadiniinteena"
New-Delhi-Wasiiru Dowlada Arimaha Dibada ee wadanka India Haweeyneyada lagu Magacaabo Preneet Kaur ayaa shaaca ka qaaday in dowladooda ay Dadaal Xoogan ugu jirto sidii kooxo burcad badeed ah looga siideyn lahaa Badmaaxiin Dalkeeda u dhashay oo muddo farabadan gacanta ugu jira Burcad badeeda Soomaalida.
Wasiiru dowlada arimaha Dibada ee India ayaa waxaa ay sheegtay in xilligan ay gacanta Burcad badeeda ku jiraan ilaa 55 badmaax kuwaasi oo siyaabo kala duwan looga afduubtay Xeebaha u dhow Soomaaliya balse iminka ay ku dadaadali doonan Sidii looga siideyn lahaa kooxda qafaalka u haysata.
Mss. Preneet Kaur ma soo hadal qaadin in Dowladoodu ay ku qancin doonto burcad badeeda lacag madaxfurasho ah bacdamaa ay kooxaha Burcad badeeda Soomaalidu inta badan gadiidka ay qafaashaan & shaqaalahaba ka qadaan Lacag malaayiin Dolar ah.
Dowladaha India & Filibiin ayaa ah Dowladaha badmaxiintooda & gadiidkooda inta badan lagu afduubto Xeebaha Soomaaliya waxaana Dowlada Filibiin ay noqotay Dowlada keliya ee badmaaxiintii ugu badnaa ay ka qafashaan Burcad badeed Soomaali ah.
Dadaalka ay iminka Shaaca ka qaaday Dowlada India waxaa uu rajo wanaagsan gelinayaa Ehelada Badmaaxiinta Hindida ah ee lagu haysto Xeebaha Soomaaliya kuwaasi oo walaac daran ka qabay in asxaabtooda ay laayaan Burcad badeeda Soomaalida.
Kooxaha Qafaalatada Soomaalida ah ayaa horey ugu hanjabay hadii aan lagacaha ay Dalbanayaan la siin inay dilli doonan Kooxaha ay afduubka u haystaan ee u dhashay Wadanka India.
Horey waxaa si aad ah loga deyrinayay Xaalada Caafimaad & midda nololeed ee ay ku nool yihiin Badmaaxiinta Hindiya ee Gacanta ugu jira Burcad badeeda Soomaalida bacdamaa ay kooxahaasi ku xiran yihiin qol yar islamarkaasina aysan helin Raashinka Daruuriga & Biyaha Caadiga ah.